Nnwom 104 NA-TWI - Ɔbɔadeɛ ayeyi - Me kra, kamfo - Bible Gateway
Nnwom 103Nnwom 105
Nnwom 104 Nkwa Asem (NA-TWI)
104 Me kra, kamfo Awurade! O Awurade, me Nyankopɔn, woyɛ ɔkɛse! Wohyɛ tumi ne anuonyam mu. 2 Wode hann akata wo ho. Wotrɛw ɔsoro mu te sɛ ntama, 3 na wusii wo fi wɔ nsu ani. Wode omununkum yɛɛ wo teaseɛnam na wotenaa mu wɔ mframa ntaban so. 4 Wode mframa yɛɛ w’asomafo, na anyinam gya a ɛpa no yɛɛ w’asomfo.